၂၀၂၁ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၀ ကား | News Bar Myanmar
၂၀၂၁ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၀ ကား
၂၀၂၁ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာတော့ ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အများကြီးထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်ပါ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၀ တွဲကတော့ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတုန်းကကော၊ ပြသပြီးတဲ့အချိန်မှာပါ အမြင့်ဆုံးစံချိန်တွေရရှိထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေပါ။
10. My Best Friend’s Story
အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင် ၂ ယောက်ကို အသားပေးရိုက်ကူးထားတဲ့ My Best Friend’s Story မှာတော့ NiNi နဲ့ Cecilia Liu Shishi တို့က အဓိကပါဝင်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးထားပြီး ဇာတ်ညွှန်းချောမွေ့မှုနဲ့ ရင်ထဲထိစေမယ့်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကြောင့်ပါ ထုတ်လွှင့်ပြသစဥ်မှာပဲ ကြည့်ရှုသူ 1.6 billion ကျော်အထိ ရရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှကြည့်ရှုသူ 1.8 billion အထိရှိခဲ့တဲ့ Bromance ဇာတ်လမ်း Word of Honor ကတော့ အဆင့် ၉ နေရာမှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ တခြားသောပြသတဲ့လိုင်းတွေနဲ့ယှဥ်ရင် Word of Honor ကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ Youku ဟာ ထုတ်လွှင့်မှုပုံစံပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့် ထင်သလောက် အဆင့်မရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ နိုင်ငံတကာအထိ နာမည်ကြီးသွားခဲ့တာကြောင့် Netflix မှာတောင် ပြသခွင့်ရခဲ့ပြီး Weibo နဲ့ Twitter တခွင်မှာလဘ်း မြောက်မြားစွာသောပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
Qin Lan နဲ့ Wang Hedi တို့ရဲ့ The Rational Life ဇာတ်လမ်းကတော့ ကြည့်ရှုသူ 2.43 billion ကျော်အထိကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဓိကဇာတ်ဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကွာခြားမှုက ကြီးမားပေမဲ့လည်း The Rational Life ဇာတ်လမ်းရဲ့ လှပတဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးနဲ့ ပုံဖော်ရိုက်ကူးသူတွေရဲ့အတွဲညီမှုတွေကြောင့်ပဲ အဆင့် ၈ နေရာကို ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Diliraba Dilmurat, Leo Wu Lei, Zhao Lusi နဲ့ Liu Yuning တို့ အဓိကရိုက်ကူးထားတဲ့ The Long Ballad ဇာတ်လမ်းကတော့ ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးတာတောင် ယခုအချိန်အထိစံချိန်တင်နေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ လူပြောများခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပေမယ့်လည်း အားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့စံချိန်ထက်နည်းပြီး ကြည့်ရှုသူ3billion လောက်သာ ရရှိခဲ့တာကြောင့် အဆင့် ၇ နေရာကိုသာ ရရှိထားခဲ့ပါတော့တယ်။
ခေတ်ပေါ်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးမှာတော့ ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်ကြားက ရင်ခုန်စရာဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတွေကြောင့် ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် တလှပ်လှပ်ခံစားရတဲ့အထိ ကြည်နူးစရာကောင်းလှပါတယ်။ Ma Sichun နဲ့ Bai Jingting တို့ရဲ့ အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ကြည့်ရှုသူတွေကို အံ့သြသွားစေခဲ့ပြီး မှတ်ချက်ကောင်းတွေရရှိခဲ့သလို ကြည့်ရှုသူစံချိန် 3.585 billion ကျော်အထိ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ကူးယဥ် sci-fi ဇာတ်လမ်းတွဲ Rattan မှာတော့ Zhang Binbin နဲ့ Jing Tian တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူ 3.95 billion ကျော်အထိရရှိခဲ့တာဟာလည်း အဓိကဇာတ်ဆောင်နှစ်​ယောက်ရဲ့ Ro ဆန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
4. The Sword and the Brocade
Wallace Chung နဲ့ Tan Songyun တို့ရဲ့ The Sword and the Brocade ဇာတ်လမ်းကတော့ လူပြောများခဲ့တဲ့အထိ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ စီစဥ်ထားတဲ့လက်ထပ်ပွဲမှစပြီး ကြည်နူးစရာအဖြစ်အပျက်လေးတွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပါ။ Sword and the Brocade က ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ပထမအပတ်အတွင်းမှာကို 1 billion ကျော်ရရှိခဲ့ပြီး ပြသပြီးစီးချိန်မှာတော့ 4.79 billion အထိ ရရှိခဲ့တာကြောင့် အောင်မြင်မှုအကြီးကြီးရခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။
3. My Heroic Husband
ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပေမဲ့ ထင်မထားလောက်တဲ့ Ro ဆန်မှုတွေပါဝင်တာကြောင့် ကြည့်မိသူတိုင်းရင်ထဲနွေးသွားစေပါတော့တယ်။ Guo Qilin နဲ့ Song Yi တို့ကလည်း အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် My Heroic Husband ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ 4.356 billion အထိ ရရှိခဲ့ပြီး iQiyi ရဲ့ စံချိန်တွေကို ချိုးနိုင်ခဲ့ကာ 2021 ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း လူကြည့်အများဆုံး ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းထဲက တစ်ကားအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Zhao Liying နဲ့ Wang Yibo တို့ရဲ့ ဝတ္ထုကိုကျောရိုးယူထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ Legend of Fei ကတော့ ကြည့်ရှုသူ 5.408 billion အထိ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ဝတ္ထုကို အခြေခံထားတာကြောင့် ဝေဖန်သံတွေလည်းရရှိခဲ့သလို အောင်မြင်မှုကလည်း အကြီးအကျယ်ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၁ နေရာကို ရယူထားနိုင်တာကတော့ နာမည်ကြီးမင်းသား Xiao Zhan ရဲ့ Douluo Continent ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းအတွက် Promotion ပြုလုပ်ခြင်းနည်းပေမဲ့လည်း ကြည့်ရှုသူ 5.446 billion အထိ ရရှိခဲ့တာကြောင့် ဖျော်ဖြေလောကထဲမှာ စံတင်ရမယ့် အောင်မြင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Next “Friends: The Reunion” မှာ BTS ပါဝင်ထားတဲ့အပိုင်းကို ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ တရုတ်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ရေး »
Previous « Rosé ဟာ သူမရဲ့ ​ရွှေအို​ရောင်ဆံနွယ်​လေးကို ပုံမပျက်​အောင် ဘယ်လိုကြိုးစားထိန်းသိမ်းရလဲ